China KQH Series single Stage nkqo Chemical Pump abavelisi kunye nabathengisi | KAIQUAN
Ubunjineli bemichiza, ukuhambisa iimveliso zeoyile, ukutya, isiselo, amayeza, ukwenziwa kwephepha, unyango lwamanzi, ukhuselo lokusingqongileyo, ezinye zeasidi, ialkali, ityuwa njl.
Ukuhamba: 2.2-480m3 / h
Amandla emoto: I-0.12-90kW
Isantya: 1480r / min okanye 2960r / min
Ubuninzi bexinzelelo lokusebenza: .61.6MPa
Ubushushu obuphakathi: -10 ℃ ~ 80 ℃
1. Olu chungechunge lweempompo zeekhemikhali ezingamanzi zimi nkqo, ukufunxa kunye nokukhutshwa kwempompo kububanzi obufanayo, kwaye imigca yazo embindini ikumgca ofanayo oxwesileyo kunye ne-orthogonal kwi-shaft ethe nkqo. Impeller sisakhiwo esivaliweyo. Inkxaso yempompo ngokuthe ngqo ihleli kwipleyiti esezantsi edityaniswe nomzimba wempompo.
2. Olu ngcelele lweepompo ze-centrifugal ziyakwazi ukudibanisa i-rotor (kubandakanywa imoto) yokugcinwa ngaphandle kokuhambisa umzimba wepom kunye ne-inlet kunye ne-outlet yokudibanisa imibhobho.
3. Uyilo lokwahlulahlula shaft kolu luhlu lweempompo ngokusisiseko kuthintela umonakalo kwi-shaft yemoto ebangelwa ngumhlwa. Ukuqinisekisa ngokupheleleyo ukusebenza okuzinzileyo nokuthembekileyo kwexesha elide kweemoto.
4. Iitywina shaft zolu ngcelele lweepompo ze-centrifugal zisebenzisa ezakhelweyo ngaphakathi, isiphelo esinye, amatywina alinganisiweyo oomatshini.
5. Isakhiwo sempompo ethembekileyo nenoveli yolu ngcelele lweempompo zinokukhetha ngokulula isakhiwo se-B5 semoto esemgangathweni ukuqhuba ngokuthe ngqo impompo yamanzi.
6. Ubume bolu chungechunge lujikeleza impompo yeekhemikhali kulula kakhulu kwaye kulula ukuyigcina. Nje ukuba ishafu yempompo ifune ukubuyiselwa endaweni yayo, kulula ukuba idibanise kwaye ifake, kwaye indawo ebekwe kuyo ichanekile kwaye ithembekile.
7. Olu ngcelele lotshintsho lweekhemikhali iimpompo shafts kunye neemoto shafts ziqiniswe ziqhagamshelene, kwaye ukuqhubekeka phambili kunye nokusengqiqweni kokusebenza kunye netekhnoloji yendibano yenza ukuba imiphini yeempompo ibe nokuxinana okuphezulu, ukungcangcazela okuphantsi nengxolo ephantsi.
8. Olu luhlu lweempompo kunye neempompo zidityanisiwe kwaye zafakwa ngokuthe nkqo. Xa kuthelekiswa neempompo zeekhemikhali ethe tyaba yesakhiwo ngokubanzi, inokuwunciphisa kakhulu ummandla weyunithi kwaye ugcine ukonga imali.
Amagama aphambili ahambelana noko:
Pump Pump Chemical, Pump Chemical Chemical, Pump Chemical Chemical, Pump Chemical Chemical, Chemical-Pump Pump, Chemical-Pump Pump, Chemical-Pump Pump, Iipompo zeChemical Pump Centrifugal, iPompo yeComputer yeComprifugal yeComprifugal, iComputer Centrifugal yeePompo zeNsimbi ezingenanto, njl.
Egqithileyo KZJ Series oluludaka Pump
Okulandelayo: I-KQWH Series Inqanaba elinye leMpompo yeKhemikhali ethe tyaba
Izixhobo zeKQGV zokuBonelela ngaManzi (Impompo yokuNyusa)
I-KZA / KZE / KCZ Impompo yePetroli
I-DG / ZDG Impompo yokuThintela iBoiler
I-KQW Inqanaba elinye lePompu yeCentrifugal
I-KQL ngqo-edityaniswe kumgca weSigaba esinye seVertica ...